SXAE-107 nke a na-ahazi nke a na-emecha rụọ ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma-sxaequipment-Chinese,China,Manufacturer,Supplier,Factory,Price
Ibo language SXAE-107 nke a na-ahazi nke a na-emecha rụọ ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma
Aha aha: Akpanye Akpaaka Akpa Ụdị Igwe Ihu Igwe na Igwe Na-ekpo ọkụ
maka akwa ọkpọchi, ụrọ ma ọ bụ mkpịsị aka,
ebipụta multicolor, na-enweghị ntinye aha akara.
akwa mgbachi akpaka;
Ngwá ọrụ nkwụsị aka;
enweghị ọrụ ọ bụla na-arụ ọrụ;
eme ka usoro ịgwọ ọrịa UV, ogologo oge ndụ, nchekwa ike, eletriki igwe eletriki igwe nhọrọ;
Nchịkwa PLC na ngosipụta ihuenyo mmetụ;
ịrụ ọrụ nchebe na ọkọlọtọ CE;
isi ihe na-acha ọkụ ọkụ.
Mbipụta ọsọ: 3000 Mpekere / awa,
Mbipụta size: okpu dayameta 15-34mm, ogologo 25-60mm;
Kalama dayameta 20-65 mm, ogologo 25-150 mm,
Nsogbu ikuku na-eme mpako: 6-8 Bar,
LPG: 1.5 Ogwe,
Akụkụ: L 2250 * W 1360 * H 2280 mm,
Ike: AC 380V, 3-Phase, 50Hz / 60Hz
ụlọ nche nchebe nke nchekwa nchebe, ị gụọ usoro nhọrọ,
ígwè dị ọkụ na-acha ọkụ, akwụkwọ nchacha, akwụkwọ ntinye akwụkwọ, stampụ, pịa akwụkwọ,
uru: enwere obi ụtọ na gburugburu ebe obibi, enweghị kemịkị na mkpofu ihe mkpofu, ogologo oge, nnukwu ọnụ ahịa kwadoro, na-arụ ọrụ nke ọma.
agafee na ngwaahịa ahụ.
Onye na-arụ ọrụ na-emepụta ụdị ihe eji emepụta akpọrọ ihe dị iche iche na-arụpụta ihe na ígwè na-emepụta ihe.